के उत्कृष्ट होला त अनमोल अभिनित कृ ?FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
के उत्कृष्ट होला त अनमोल अभिनित कृ ?
कबिता बलामी, फिल्मी फण्डा ।
चलचित्रको घोषणा देखी नै चर्चामा रहेको फिल्म हो कृ । एकातिर ठूला ब्यानरले निर्माण गर्न लागेको चलचित्र र अर्को तिर अनमोलको अभिनय रहने चलचित्र भएकै कारण पनि कृ को चर्चा बढ्नु स्वभाविक नै हो । यति मात्र नभएर पुराना सदावहार नायक भुवन केसी पनि निर्माणमा सहभागी छन् भने अर्को तिर सुरेन्द्र पौडेलले निर्देशन गरेका कारण पनि चलचित्रको चर्चा बढि छ । पछिल्लो समय कृ को लुक्स सार्वजनिक भएपछि झन आम दर्शकहरुमा कृ हेर्नुपर्ने र कस्तो होला त कृ भने उत्सुकता पक्कै जागेको छ ।
के उत्कृष्ट होला त अनमोल अभिनित कृ ? यो प्रश्न यतिखेर अनमोल केसीका फ्यानहरुलाई मात्र हैन, समग्र नेपाली चलचित्रका पारखी दर्शकहरु र चलचित्रकर्मीमा पनि रहेको छ ।
चर्चाको हिसाबले कृ उत्कष्ट हुनु पर्छ । यसको पछि धेरै कारकहरु छन् । अनमोलको यस अघिका चलचित्र होस्टेल रिटन्र्स, जेरी, गाजलु एक किसीमले सफल चलचित्र हो । यो भन्दा कृ उत्कृष्ट हुनुपर्ने नै छ । यसको साथै अनमोलले यसमा लिएको पारीश्रमीक, पात्र निर्माणको लागि खर्च गरेको समय र आर्थिक खर्चले पनि यसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दछ जस कारण पनि कृ उत्कृष्ट हुनु पर्छ । यदि कृ पनि अनमोलको पहिलेकै चलचित्रको धारमा उभिने हो भने दर्शकमा अनमोल प्रतिको आशा बढ्ने छैन । यसर्थ यसको जिम्मेवार चलचित्र कृ हुनेछ ।
चलचित्र कृ को फस्टलुक सार्वजनिकसँगै धेरैलाई कृ साउथ मुभिबाट प्रभावित भएको महशुस भएको छ । कतिपय सञ्चारकर्मीले कृ को सार्वजनिक पोष्टरसँगै साउथ फिल्मका पोष्टर जोडेर प्रस्तुत गरेको छ । जे होस् चलचित्र कृ पूर्ण रुपमा एक्शन चलचित्र भएको फस्टलुक पोष्टरबाट भान हुन्छ । अनमोल यसै चलचित्र मार्फत एक्शन अवतारमा प्रस्तुत हुदैछ भन्दा फरक पर्दैन । अनमोलको लुक्सलाई समेत एक्शन अवतारमा चलचित्रका निर्माण टिमले उतारेका छन् ।
यस अघि चलचित्र प्रदर्शन हुँदा अनमोल केसीलाई सुरक्षा भन्दै प्रहरी र बडिगार्ड सहित हलहलमा पुर्याईएको थियो । चलचित्र कृ प्रदर्शन हुँदा सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुने हो त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
अन्तत चलचित्र कृसँग अनमोल केसीको सिने नगरी यात्रा पनि जोडेको कारण यो फिल्म हिट हुन जरुरी छ ।